बीसीजी खोपको प्रयोग नहुने देशमा कोरोनाबाट मर्ने दस गुना बढी - Jhilko
बीसीजी खोपको प्रयोग नहुने देशमा कोरोनाबाट मर्ने दस गुना बढी
काठमाडौ । क्षयरोग प्रतिरोधी खोप बीसीजी दिने नीति नभएका देशहरूमा यो खोप दिइएका देशहरूको तुलनामा कोरोनाभाइरसबाट मर्नेहरूको संख्या दस गुना बढी भएको छ ।
अमेरिका र बेलायतका चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताहरूले १७८ देशका डेटाको अध्ययन गरी यो पत्ता लगाएका हुन् ।
बीसीजी वा बासिलस कलमिट गुएरिन नामक खोप क्षयरोग प्रतिरोधीको रूपमा जन्मेका बेला दिइने गरिन्छ ।
भारत लगायतका विकासशील देशहरूमा यो खोप दिइने गरिन्छ ।
अमेरिका, इटली र हल्यान्ड जस्ता देशमा वैश्विक बीसीजी खोप नीति लागु गरेको नपाइएको अध्ययनबाट फेला परेको छ ।
९ मार्च देखि २४ मार्चसम्मको १५को कोरोनाभाइरसबाट मर्नेहरूको डेटा अध्ययनबाट बीसीजी खोप कार्यक्रम भएकाहरूको तुलनामा खोप कार्यक्रम नभएका देशमा १० गुना कोरोनाको असर भएको पाइयो । १७८ देशमा २१ देशमा बीसीजी खोप कार्यक्रम नभएको २६ देशमा यसबारे स्पस्ट तथ्यांक नरहेको पाइयो ।
तथ्यांक स्पस्ट नभएका देशहरूलाई यो खोप कार्यक्रम नभएकै देशको समूहमा राखी यो अध्ययन गरियो ।
हस्टन टेक्सासस्थित एमडी एन्डर्सन क्यान्सर सेन्टरमा युरोलजि अंकोलजि सर्जरी एन्ड क्यान्सर रिसर्च विषयका प्राध्यापक तथा यो अध्ययनका सहलेखक डा. आशिष कामतले बीसीजी कार्यक्रम भएका देश र नभएका देशहरूबीचमा खोप र कोभिड –१९को प्रभावबीचको अन्तर अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
डा. कामतले भने “ बीसीजी खोप कार्यक्रम भएका देशहरूको तुलनामा बीसीजी खोप कार्यक्रम नभएका देशमा कोरोनाभाइरसको असर १० गुना बढी रहेको पाइयो ।”
हालैका सातामा कोरोनाभाइरसको सम्भावित खोपका लागि बीसीजी खोप एक प्रभावशाली खोपको रूपमा अगाडि आएको थियो । बीसीजीबाट कोरोनाभाइरसको खोप बनाउने यो अध्ययन अस्ट्रेलियामा जारी रहेको छ ।
बीसीजी खोप लिएकाहरूमा कोभिड–१९सँग जुध्ने क्षमता बढी रहेको पाइएमा भारत जस्ता देशका लागि ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले लगाएको लकडाउनबाट उसको अर्थतन्त्रमा हरेक दिनको लागत ४.६४ अमेरिकी डलर बराबरको हुने एक अध्ययनले जनाएको छ । डा. कामतका अनुसार यसको थप अध्ययनमा भारतलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ ।
जन्मेका बेला दिइने बीसीजी खोप अन्य सरूवा रोगबाट मात्र नभएर क्यासरबाट बचाउने गरेको पाइएको छ । भारत लगायतका देशमा बीसीजीको खोप कार्यक्रम दशकौं देखि सञ्चालनमा आएको छ ।नयाँ खतरासँग जुध्न यो खोप सहयोगी हुन सक्ने देखिएको डा. कामतले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनको स्वास्थ्यलाभको कामना
इटालीमा एकै दिन कोरोनाका कारण एक सय ३३ को मृत्यु
कोरोना भाइरसले इटालीमा एक दिनमा एक सय ३३ को मृत्यु भएको छ । यसबाट इटालीमा मृत्यु...
सिरहामा २ निरीक्षक निष्काशित, ११ परिक्षार्थीको परिक्षा...
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्तर्गत आज सम्पन्न अनिवार्य गणित बिषयको परीक्षामा...